လေပြေချို: Go Away Stress
စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ လူသားတိုင်းအတွက် ရှောင်လွှဲလို့လည်းမရ ခဏခဏလည်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ မတည့်အတူနေရန်သူကြီးပေါ့။ စာမေးပွဲအတွက်၊ အလုပ်အတွက်၊ လူမှုရေးကိစ္စအတွက်၊ စီးပွားရေးကိစ္စအတွက်၊ ကျန်းမာရေးအတွက်၊ ကိုယ့်အတွက်၊ သူများအတွက် စိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေ၊ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ၊ စိတ်မကောင်းစရာတွေနဲ့ခဏခဏ အမြဲတမ်းနီးပါး စိတ်ဖိစီးမှုခံနေရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ထောင်းလို့ ကိုယ်ကြေတတ်ပါတယ်။ ခုခေတ် သွေးတိုး၊ နှလုံး စတဲ့ ရောဂါတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကြောက်စရာ ရောဂါတွေပါပဲ။ ပြီးတော့ စိတ်ဖိစီးမှုများရင် ရုပ်လည်းရင့်ပြီး
ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့သူတွေလည်း စိတ်ချမ်းသာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ဖိစီးမှုမှာ မကောင်းတဲ့ နောက်တော်ပါးတွေက အများကြီးပဲနော်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ပျိုလို့ ကိုယ်နုစေဖို့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ပါးစေနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
- သင့်ခန္ဓာကိုယ်က မဂ္ဂနီစီယမ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်တွေ လုံလောက်စွာမရရှိဘူးဆိုရင် စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တတ်ပါတယ်။
- ဒါကြောင့် မဂ္ဂနီစီယမ်နဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် လုံလောက်စွာပါတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးပါ။
- စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကို ခန္ဓာကိုယ်က ခံနိုင်ရည်ရှိစေဖို့ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကိုလည်း စားသုံးပေးသင့်တယ်နော်။
- ဘယ်အစားအစာမှာ ဘယ်ဓာတ်ပါတယ်ဆိုတာကို သဘာဝရဲ့ အာဟာရမှာ ဖတ်ကြည့်နော်။
- ကော်ဖီ၊ လ္ဘက်ရည်၊ ချောကလက်နဲ့ သကြားတို့ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိုဆိုးစေပါတယ်။
- ပြီးတော့ အိပ်ချင်စိတ်ကို လျော့နည်းစေလို့ အိပ်ရေးလည်းပျက်စေနိုင်ပါတယ်။
- အိပ်ရေး၀၀အိပ်စက်ခြင်းဟာ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို လျော့နည်းစေပါတယ်။
- ဒါကြောင့် အိပ်ရာမ၀င်မီ ကော်ဖီ၊ လ္ဘက်ရည်၊ ချောကလက်နဲ့ သကြား စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
- တရားထိုင်တာဟာ စိတ်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေပြီး ကျန်းမာရေးကိုလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်။
- ဒါကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်တဲ့သူတွေ၊ မကြာခဏ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံရတဲ့သူတွေဟာ တရားထိုင်ပြီး စိတ်ကို ပြေလျော့အောင် ထိန်းပေးသင့်ပါတယ်။
- စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှု ခဏခဏဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။သင်ရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနည်းနေပြီလား ??
- စာရွက်ပေါ်မှာ သင့်ရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ချရေးလိုက်ပါ။ “ငါက အရမ်းစမတ်ကျတယ်၊ ဥာဏ်ကောင်းတယ်၊ ငါ့မျက်လုံးလေးတွေကလှတယ်” စသည်ဖြင့်ပေါ့။
- ဒီလိုချရေးခြင်းကြောင့် ကိုယ့်ကောင်းကွက်လေးတွေကို ကိုယ်တိုင်မြင်လာပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု တိုးလာစေပါတယ်တဲ့။
- သတင်းကောင်းတစ်ခု ပြောပြမယ်နော်။
- ခဏခဏ စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တတ်တဲ့ သူတွေဟာ ထက်မြက်တယ်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းကောင်းတယ်၊ ဖန်တီးတီထွင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်တဲ့။
- ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်၊ စိတ်ဖိစီးမှု ခဏခဏဖြစ်တတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုနည်းလာရင် အလုပ်မှာရော လူမှုရေးမှာပါ ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။
- ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိပါ။ အကောင်းမြင်ပါ။ သင့်မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ၊ သင့်ကို သူများတွေအားကျရတဲ့အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
- ဘယ်အရာကိုဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီး ဆောင်ရွက်ပါ။
- သူများတွေလုပ်နိုင်သလို သင်လည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။
- အလုပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ ကြိုးစားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သူများတွေထက် အများကြီးကို သာမှာပါ။
Don’t hope the return
- ကိုယ်လုပ်ရတာ ကိုယ်ပေးဆပ်ရတာတွေအတွက် ပြန်ရဖို့ အရမ်းမမျှော်လင့်ပါနဲ့။
- ဒါဟာလည်း သင့်အတွက် ကြီးမားတဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
- ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ကို ရင်ဖွင့်တာကလည်း စိတ်ဖိစီးမူတွေကို လျှော့နည်းစေပါတယ်။
- သင်နဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့၊ သင့်ခံစားချက်တွေကိုနားလည်ပေးနိုင်တဲ့၊ သင့်အတွက် အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်တဲ့သူကို သင်ခံစားနေရတာတွေ အကုန်ပြောပြလိုက်ပါ။
- သင့်စိတ်ထဲပေါ့သွားနိုင်သလို သင့်အခက်အခဲတွေအတွက်လည်း အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေရနိုင်ပါတယ်။
- ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောချင်တော့ရင်တော့ စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ သင့်ခံစားချက်တွေ အကုန်ချရေးလိုက်ပါ။
- ချရေးပြီးချင်းချင်းမှာပဲ သင့်စိတ်ထဲပေါ့ပါးသွားပါလိမ့်မယ်။
- နောက်တစ်နာရီ ကြာတဲ့အခါမှာ သင်ရေးထားတာကို သင်ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။
- သင့်စိတ်ဟာ အံသြစရာကောင်းလောက်အောင် တည်ငြိမ်နေပြီး သင့်ပြဿနာအတွက် အရင်ကလောက် စိတ်မညစ်တော့တာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
- သင်အရမ်းစိတ်ရူပ်ခဲ့ရတဲ့ အရာတွေအတွက် ဖြေရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
- သင့်ကိုယ်သင်လည်း အရင်ကထက်ပိုပြီးနားလည်လာပါလိမ့်မယ်။
- လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် နှလုံးခုန်နူန်းကို မြန်စေပြီး ခန္ဓာကိုယ်သွေးလည်ပတ်မူကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
- သွေးပေါင်ကိုတဖြေးဖြေးကျစေလို့ စိတ်ဖိစီးမူကြောင့် သွေးပေါင်တက်နေတာကို ပြန်လည်ထိန်းညှိပေးပါတယ်။
- စိတ်ဖိစီးမူကို လျော့စေသလို စိတ်ဖိစီးမူကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မထိခိုက်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
- ယောဂ၊ ထိုက်ချိ နဲ့ အသက်ရူလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ။
- စိတ်ဖိစီးမူကိုရော စိတ်ဖိစီးမူကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ဖိစီးမူလက္ခဏာတွေကိုပါ သက်သာစေပါတယ်။
- သင့်ကို စိတ်ဖိစီးမူဖြစ်စေမယ့်အရာတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။
- သင့်အကြောင်းကိုပဲ စဉ်းစားပါ။
- သင့်ရဲ့ စိတ်ဖိစီးမူတွေကို ဖြေရှင်းပေးရမယ့်သူက သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။
- ဒါကြောင့် သင့်စိတ်ဟာ လန်ဆန်းတက်ကြွပြီး အားရှိနေစေဖို့ သင့်စိတ်ကို ပျော်စေမယ့် အရာတွေကို ဆောင်ရွက်ပါ။
- သီချင်းအော်ဆိုခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း၊ Spa သွားခြင်း၊ ကမ်းခြေသွားခြင်းစတဲ့ သင့်လုပ်ချင်တဲ့ အရာတွေကို လုပ်လိုက်ပါ။
- ရီစရာတွေကို ဖတ်ပါ၊ တွေးပါ။
- စိတ်ချမ်းသာစရာတွေကိုပဲ တွေးပါ။
- ဘယ်အခက်အခဲမဆို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
- ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်သလို ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီး သင့်အစွမ်းကိုပြလိုက်ပါ။
- အခက်အခဲဟာ သင့်အရည်အချင်းကို ပြဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
- အားမငယ်ပါနဲ့။ လက်မလျှော့ပါနဲ့။
- သင့်ဟာပြသနာတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံနေရသူလား။ ပြသနာတွေကို ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သူလား။
- သင့်စိတ်ကို ပြောင်းလဲ လိုက်ရုံပါပဲ။
- ကောင်းတစ်လှည့် ဆိုးတစ်လှည့် လောကဓံမှာ ဘယ်အရာမှ မတည်မြဲပါဘူး။
- သင့်မှာ အဆိုးတွေကြုံနေရတာလား။
- မကြာခင်ကောင်းလာဖို့ပဲလို့ ယုံကြည်ထားပါ။
- သိပ်မကြာခင်မှာပဲ အဲဒီအခက်အခဲတွေဟာ ဘာမှလည်းမဟုတ်ပါလားလို့ သင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။
Optimize ( keepapositiue attitude )
- အားလုံးကို အကောင်းမြင်လိုက်ပါ။
- အခက်အခဲဆိုတာ အောင်မြင်မူရဲ့လမ်းစပါပဲ။
- အဲဒီအခက်အခဲကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
- ကြုံနေရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ရအောင်ဖြေရှင်းပြီး သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မူကို မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
- ဘယ်လိုမှ ဖြေရှင်းမရရင် အဲဒီအကြောင်းကို ဘာမှမတွေးပါနဲ့တော။
-့စိတ်ညစ်စရာတွေကို ဟာသလုပ်ပြီး ရီပြလိုက်ပါ။
- ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲမှာကြည့်ပြီး ပြုံးပြလိုက်ပါ။
- စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့စေဖို့ အလွယ်ဆုံးနဲ့ ခုချက်ချင်းလုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလေးပါပဲ။
- တကယ်လို့ စိတ်ဖိစီးမူဟာ အရမ်းဆိုးပြီး အလွန်အမင်းစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းပါ တွဲလာပြီဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး ကုသမူခံယူပါ။
ကဲ …. သင်စိတ်ညစ်နေလား။ အထက်ပါနည်းလမ်းလေးတွေကို ချက်ချင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတွေက သင့်ကိုအနိုင်ရဖို့ အခွင့်အရေးမပေးလိုက်ပါနဲ့။ သင်ကိုယ်တိုင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို အနိုင်ယူလိုက်ပါ။ Post by (www. myanmarskylink.com) မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Posted by လေပြေချို at 5:03 AM